Accueil > Gazetin'ny nosy > 7 Febroary: Samy nilaza ho tompony i Hery sy Andry
7 Febroary: Samy nilaza ho tompony i Hery sy Andry
aly no 9 taona nitsingerenan’ny tolom-panafahana notarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina sy ny mpomba azy. Tolom-panafahana izay nanonganana ny didy jadona sy fanamparam-pahefana nataon’ingahy Ravalomanana Marc nanomboka tamin’ny 2002 ka hatramin’ny 2009. Nitroatra ny vahoaka izay notarihin’ingahy Andry Nirina Rajoelina. Nirodana ny fanjakana tsy refesi-mandidy nentin’ingahy Ravalomanana Marc ka lasa nandositra tany Afrika Atsimo ity farany. Maro no namoy ny ainy tamin’ny fihetsiketsehana notarihin’ingahy Monja Roindefo sy ny jeneraly Dolin Rasolosoa izay nirahin’ingahy Rajoelina hilahatra teny Ambohitsorohitra hitaky ny fialan’ny filoham-pirenena tamin’izany andro izany dia ingahy Ravalomanana Marc.
Ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena amin’izao andron’ny repoblika fahefatra izao dia minisitra ny Vola nanomboka ny taona 2010 tamin’ny andron’ny tetezamita, ary mihevitra koa izy fa isan’ireo mpitolona tamin’ny fandrodanana ny jadon’ingahy Ravalomanana Marc iny ny tenany.
Ifandroritana ankehitriny ny fankalazana ny 7 febroary ka ingahy Hery Rajaonarimampianina filoham-pirenena sy ny governemanta ankilany ary Andry Nirina Rajoelina sy ny MAPAR (Miaraka amin’i Presidà Rajoelina) andaniny. Tena miady ny roa tonta fa samy milaza azy ho tompon’ny fanoherana an-dRavalomanana Marc sy ny fitondrany jadona. Nozaraina roa ihany koa ny mpitolona mikambana eo anivon’ny AV-7. Ny iray nanao akanjon’ny HVM (Hery Vaovao ho an’i Madagasikara) izay miaraka amin’ny filoham-pirenena. Notarihin’ingahy Bôna izay nahazo asa ao amin’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina ankehitriny. Izy no filohandohan’ny olona nahazo takaitra na ireo maty tamin’iny 2009 iny. Nampanaovina ny akanjon’ny HVM ny mpomba azy ireto ka rehefa avy eo, ny mpikambana izay noraofina tetsy sy teroa dia nozaraina vola rehefa avy nanatitra voninkazo ho fahatsiarovana teo amin’ny tsangam-baton’ny 7 febroary 2009.
Andaniny indray dia nampanaovin’ny Mapar akanjo volon-daoranjy sy fotsy ny mpomba azy ireo ka nampihirana ny hira faneva hoe “iny làlana iny dia làlan-tsarotra”.
Ankehitriny dia mizara roa ny mpitolona tamin’ny 2009, ka ny ilany nomba an’i Hery Rajaonarimampianina ary ny iray nijanona niaraka amin’i Andry Nirina Rajoelina.
Nalazolazo ny fanateram-boninkazo teo Ambohitsorohitra omaly 7 febroary 2018. Nanatitra fehezam-boninkazo manokana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy Voahangy vadiny. Rariny ny azy roa satria raha tsy nisy an’iny izy tsy niaka-dapa ary tsy filoham-pirenena velively. Nanao toa izany koa ny governemanta, ary ny AV-7 Bôna kosa nanipy ny voninkazony ary avy eo lasa nitsoaka toa ny nisy olona nanenjika ireny.
Ny Mapar no tonga taorian’izay ka olona teo amin’ny 50 na 70 raha be indrindra. Tsy toa tamin’ny fankalazana isan-taona intsony fa nangatsiatsiaka. Nanampy azy ireo ny mpomba an’i Alain Ramarson izay isan’ny nitolona mafy tamin’iny fotoana iny.
Nandiso fanantenana ny Malagasy iny tolona tamin’ny taona 2009 iny satria toa mbola nampidi-kizo ny firenena noho ny hambom-pon’ingahy Andry Nirina Rajoelina tamin’ny tetezamita sy Hery Rajaonarimampianina izay nampahantra mihoa-pampana ny vahoaka Malagasy izao. Nivadika gisa mainty ilay fanantenana niboiboika tao amin’ny tolona natao tamin’ny fandrodanana ny fitondrana jadon’ingahy Marc Ravalomanana.
Tsy nahomby ny tolona nataon’ny Malagasy noho ny nataon’ingahy Ratsirahonana Norbert Lala izay nisavika an’ingahy Rajoelina tamin’izay fotoana izay rehefa avy nitaingina an’i Marc Ravalomanana izy. Fandresen’ingahy Ratsirahonanana Norbert Lala hatrany no nisy teto Madagasikara nanomboka ny taona 2001 ka hatramin’izao 2018 izao. Izy koa no mbola tandapa malaza mitondra ny raharaham-pirenena rehetra amin’izao fitondran’ingahy Hery Rajaonarimampianina izao.
Ifandroritana ny tsy fahombiazana ankehitriny ka samy milaza ho tompony na i Andry Nirina Rajoelina na i Hery Rajaonarimampianina. Fahakiviana ho an’ny vahoaka maro no nitranga vokatr’izao fifandroritana eo amin’izy roalahy izao.